Momba anay - Mingsanfeng Cap Mould Co., Ltd.
Ny orinasa dia mandray ny maoderina fitantanana maoderina, miaraka amin'ny sanda famoahana 35 tapitrisa isan-taona.Henceforth, isika dia hatokana ho "One Stop Service Provider" ho an'ny serivisy sy vokatra manomboka amin'ny famolavolana bobongolo, famokarana bobongolo, fanodinana tsindrona, fivoriambe ary aorian'ny varotra.
Mingsanfeng Cap Mould Co., Ltd natsangana tamin'ny volana Jona 1999, ny orinasa dia manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy amin'ny tsindrona satroka plastika. Miaraka amin'ny karazana kapila ambony tampoka, kapila ambony kapila, kapila tsy voaroaka, satroka injeniera fiarovana, fanasana ranon-javatra, vatana tavin-tarehy kosmetika ary satroka sns. Sns
Ny orinasa dia manana atrikasa bobongolo ihany koa, izay manana traikefa manan-danja amin'ny R & D ary ny famokarana lasitra plastika, ary afaka manamboatra karazana satroka tavoahangy rehetra. Ny orinasa dia manana mpiasa efa ho 60, ao anatin'izany ny injeniera 10, injeniera bobongolo 20 ary teknisiana zokiolona 30. Ny orinasa dia mandray ny maoderina fitantanana maoderina, miaraka amin'ny sanda famoahana 35 tapitrisa isan-taona.
Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fanangonana mandeha ho azy miaraka amin'ny atrikasa fanindronana GMP. Ny milina 20 milanja 100-350T ampidirina ao anaty milina fanindronana dia misy ao Japan Toshiba, JSW, Germany Demag. Izy io dia manana bobongolo prototyping haingana sy bobongolo rafitra mpihazakazaka mafana miaraka amin'ny In Mold Closed (IMC). Azontsika atao ny miatrika karazana fahasahiranana, bobongolo avo lenta ary vokatra fampindrana manokana ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena. Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy fanodinana famokarana vokatra satrony tavoahangy isan-karazany. Ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fitaovana bobongolo dia Yasda, Okuma, OKK, Hatting ary Japan Longze. Ny fitaovam-pitadiavana dia misy ny Zeiss telo-habe sy ny refy roa. Manomboka izao dia hatokana ho “Mpanome Tolotra Iray Ihany” ho an'ny serivisy sy ny vokatra izahay, manomboka amin'ny volavolan'ny bobongolo, famokarana lasitra, fanodinana tsindrona, fivoriambe ary aorian'ny fivarotana.